Ted Lasso (2020) – Gold Channel Movies
Tan Lines Aug. 28, 2020
The Hope That Kills You Oct. 02, 2020
2Season2Jul. 23, 2021
Midnight Train to Royston Oct. 01, 2021
Inverting the Pyramid of Success Oct. 08, 2021
Apple Tv + ရဲ့ Series တိုင်းနီးပါးက Rating တွေ အရမ်းကောင်းတာကို သိကြမှာပါ။ Rating ကောင်းသလိုပဲ ဇာတ်လမ်းလေးတွေကလည်း တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ အခုတစ်ခါ Apple Tv+ ရဲ့ Rating အကောင်းဆုံး ၁၀ ကားထဲကမှ နံပါတ် ၃ ခု မြောက်ကို တင်ဆက်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်သဘောကျပြီး အားပေးနေကျ ဘောလုံးအသင်းတွေမှာ နည်းပြအပြောင်းအလဲဖြစ်လာရင်၊ ဘယ်သူမဆိုအကောင်းပဲလိုချင်ကြတာပါ။ AFC Richmond အသင်းပိုင်ရှင်ကတော့ ဘောလုံးအကြောင်းဆိုရင် ဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့ Ted Lasso ကို နည်းပြခန့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသင်းပိုင်ရှင်က ဒီအသင်းပျက်စီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲငှားချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Ted တစ်ယောက်ကတော့ ဒီအတိုင်းဘာမှသုံးစားမရတဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Wichita State Shockers ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ဘောလုံးအသင်းကို တန်းတက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဘောလုံးဆိုလို့ MLS တို့ USL တို့မဟုတ်ဘဲ၊ အမေရိကန်တွေရဲ့ Original လက်နဲ့ စကားရတဲ့ အမေရိကန်ဘောလုံးပါ။ လားလားမှမသက်ဆိုင်တဲ့ အားကစားနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေထဲက အခြေခံဖြစ်တဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြား၊ ထောင့်ကန်ဘော၊ လက်ပစ်ဘောတို့အပြင် ဘယ်လိုရှင်းပြရှင်းပြ ဘောလုံးပွဲကြည့်နေကျသူတွေထဲမှာတောင် နားမလည်ကြတဲ့ လူကျွံဘောတွေနဲ့ Ted တစ်ယောက် တိုင်ပတ်ပါတော့တယ်။
အင်္ဂလန်သားတွေရဲ့ ဇကိုလည်း အားလုံးသိပြီးကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် အင်္ဂလန်နဲ့ အီတလီ ဖိုင်နယ်ပွဲအပြီးအခြေအနေကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်ရင် တကယ့်ကိုစိတ်အားထက်သန်ကြတဲ့သူတွေပါ။ တကယ်လို့ အင်္ဂလန်ဘောလုံးအသင်းတွေက ပရိသတ်တွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါလဲသိချင်ရင် Green Street ၃ ကားကို ပြန်ကြည့်ကြပါ။ Link သေကုန်ပြီဆိုရင်တော့ App မှာ ဘယ်တော့မှမသေတဲ့လင့်နဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဆိုတော့ Ted Lasso တစ်ယောက် Premier League မှာ ဘယ်လိုတိုင်ပတ်မယ်၊ အသင်းပရိသတ်တွေက Ted ကို ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတာကို ဟာသတွေတစ်ပြုံနဲ့ ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလထဲမှာပဲ Season2ထွက်ရှိလာမယ့် Ted Lasso ကို ဘောလုံးပရိသတ်တွေ အမှီလိုက်ပြီးကြည့်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
TMDb Rating 8.5 177 votes
U ThetOctober 13, 2021Reply
SEASON2က EPISODE 1 to7လင့်တွေ အကုန်သေနေလို့ပါ… ပြင်ပေးပါဦးမင်မင်တို့ .. THanks!!
zawOctober 12, 2021Reply
Me Always You Episode 13-14ကုိအျမန္တင္ေပးပါ
myoOctober 12, 2021Reply
Young Lady and Gentleman: 1×6ကုိ1080ႏွင့္တင္ေပးပ့
kokoOctober 11, 2021Reply
Ted Lasso 2021အပုိင္း၁၀-၁၁-၁၂ကုိအျမန္တင္ေပးပါ
Kyaw zin htetOctober 10, 2021Reply
အပိုင်းသစ်တွေတင်ပေးပါအုန်းဗျ ရပ်နေတာကြာဘီ 🥺
lpoiiSeptember 20, 2021Reply
Ted Lasso 2021အပုိင္း8-9-10ကုိအျမန္တင္ေပးပါ
ThazSeptember 13, 2021Reply
Hein ThihaSeptember 12, 2021Reply
Ep 8 လေးထွက်နေပြီ…တင်ပေးပါဦးနော်…….Please
Hein ThihaSeptember 10, 2021Reply
Ep 8 လေးထွက်နေပြီ…တင်ပေးပါဦးနော်
Hein ThihaSeptember 8, 2021Reply
thank for Ep 7……….Best GC Team
Lin HtetSeptember 6, 2021Reply
Season2epi 1 linkပြင်ပေးပါလားဗျ
Hein ThihaSeptember 5, 2021Reply
Ep7လေးထွက်နေပြီ…တင်ပေးပါဦးနော်
Kyaw zinSeptember 4, 2021Reply
Season2epi 1 linkပြင်ပေးပါ pls
Hein ThihaSeptember 3, 2021Reply
အပိုင်းသစ်လေးတွေတင်ပေးပါဦးနော်………Thank you all of Gold channel Team
Hein ThihaSeptember 2, 2021Reply
Thank You Admin for new Episodes…..
Hein ThihaSeptember 1, 2021Reply
Ted lasso season2Episodes6လေးဆက်တင်ပေးပါဦး….Please…Admin
Ted lasso season2အပိုင်းသစ်လေးတင်ပေးပါဦး ….မင်မင်တို့ရေ…
kokokjAugust 30, 2021Reply
Ted Lasso 2021အပုိင္း၆ကုိအျမန္တင္ေပးပါ
Hein ThihaAugust 25, 2021Reply
Thank For New Episodes………
Hein ThihaAugust 24, 2021Reply
Please……ဆက်တင်ပေးပါဦး …….Thank admin.
U MyoJuly 16, 2021Reply
Katla ဆက်တင်ပေးပါဦး မင်မင်တို့ရေ